Now, that we have set the scene about SD-WAN, let’s discuss the particular case of SD-WAN in Myanmar and why we believe this isagreat technology for the country at this moment in time.As we have discussed extensively, SD-WAN provides significant benefits to enterprises: 1.SD-WAN eases the implementation of
Zoom that allows us to make meaningful connections with each other and our customers ၂၀၂၀ခုနှစ်သည် Zoom အတွက် စံချိန်တင်နိုင်ခဲ့တဲ့ နှစ်တစ်နှစ်ပါပဲ။ Customer များအတွက် အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုများကို ဝန်ထမ်းများကဲ့သို့ service ကောင်းကောင်းပေးနိုင်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝန်ထမ်း အချင်းချင်းသာမက Customers တွေအပေါ်မှာပါ ဂရုတစိုက်careလုပ်ပေးနိုင်ပြီး ပျော်ရွှင်တဲ့ workplaceတစ်ခု ဖန်တီးဖို့ Zoom ရဲ့ CEO ဖြစ်တဲ့ Eric S Yuan က ပြီးခဲ့တဲ့ ၁၀နှစ် အနှစ်၂၀ကတည်းက စိတ်ကူးရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုတိုးတက်မှုတွေကနေတစ်ဆင့် Company culture
ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ Zoom ကို အသုံးပြုလို့ရတဲ့ Webinar နဲ့ Meeting ကွဲပြားပုံလေးကိုပြောပြ ပေးထားပါတယ် Webinar နဲ့ Meeting ဘယ်လိုကွာခြားသလဲ?
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အထူးသင့်တော်သော GlobalNet ၏ Dedicated Internet Access တပ်ဆင်သုံးစွဲ ရန် ဘာကြောင့်လိုအပ်သလဲ
လူကြီးမင်းတို့၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားလုံး Digitalization စနစ်‌များသို့ အချိန်နှင့်တပြေးညီ လျှင်မြန်စွာ ပြောင်းလဲနိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်လာသလို Digital Economy ကိုအောင်မြင်စွာ အသွင်ကူးပြောင်းနိုင်ဖို့ လိုအပ်လာပါသည်။ Connectivity Services များသည်လည်း အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်လာပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် GlobalNet ၏ Connectivity Services ဖြစ်သော Dedicated Internet Access DIA အင်တာနက် ကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် လူကြီးမင်းတို့၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို Digitalization စနစ်သို့ ခေတ်နှင့်အညီ ပြောင်းလဲရာတွင် အထောက်အကူပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးများ ဘဏ်ကြီးများ၊ ဟိုတယ်ကြီးများ၊ စူပါမတ်ကတ်ကြီးများ၊ NGOs နှင့် INGOs များ၊ သံရုံးများ၊ International
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ချစ်သူတွေအတွက် 5BB Express WiFi by Facebook သင်ဟာ … ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကို တစ်ရက်အချိန်ဘယ်လောက်သုံးလဲ။ ဘယ်လိုအချိန် ဘယ်လိုနေရာတွေမှာ အများဆုံး သုံးရှိလဲ၊ ပြီးတော့ ဖေ့စ်ဘွတ်ကနေ ဘယ်တွေကြည့်ဖြစ်လဲ ? ဒါက အပျော်သဘောမေးလိုက်တာပါ။ သတင်းကောင်းပေးချင်တာက လက်ရှိမြန်မာပြည်မှာ လူသုံးအများဆုံးဖြစ်တဲ့ Facebook နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျိုးရှိမယ့် ဝန်ဆောင်မှုအသစ်တစ်ခုအကြောင်းပါ။ မြန်မာ့အမြန်ဆုံးအင်တာနက်ဆုတံဆိပ်ရ 5BB Broadband က ကမ္ဘာကျော် Facebook ကုမ္ပဏီတို့ ပူးပေါင်းကာ မြန်ဆန်ပြီး အခမဲ့အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Wi-Fi အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုကြီးကို မြန်မာပြည်က ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ချစ်သူတွေအတွက် ယူဆောင်လာခဲ့ပါပြီ။ Express Wi-Fi ဟာ Facebook Connectivity အစီအစဉ်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ပိုမို မြန်ဆန်တဲ့
ဖုန်းထဲမှာ အဆင်သင့်ဆောင်ထားသင့်တဲ့ 5BB App
Application တွေရဲ့အားသာချက်က ကိုယ်အသုံးပြုတဲ့ Product သို့မဟုတ် Service ကို သီးသန့်သုံးလို့ရတာ၊ Value-added Service တွေရနိုင်တာ၊ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ Content Structure ရှိတာ၊ Information စုံပြီးရှာရလွယ်ကူတာ စတာတွေပါပဲ။ သင်ဟာ 5BB အင်တာနက်အသုံးပြုသူတစ်ယောက်ဆိုရင် 5BB App ကို သင့်ဖုန်းထဲမှာ ထည့်ထားသင့်ပါတယ်။ 5BB Application ကို ဖွင့်ဖို့က လွယ်ပါတယ်။ 5BB မှ Promotion များ၊ အသိပေးချက်ကြော်ငြာများကို အလျဉ်းသင့်သလိုဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပေမဲ့ မလိုအပ်ရင် Skip နှိပ်၍ ကျော်နိုင်ပါတယ်။ အကောင့်နံပါတ်မှာ မိမိရဲ့ Customer ID နဲ့ လျို့ဝှက်ကုတ်မှာ မိမိ၏ Password ကို
5BB Broadband’s Express Wi-Fi, powered by Facebook Connectivity’s Express Wi-Fi Platform, provides Fast, Affordable, and Reliable Internet Access to Citizens: When and Where People Need It Most. Yangon, Myanmar, 16th December 2020 – 5BB Broadband, fastest Internet Award-Winning Consumer Broadband Business of Global Technology Group, is partnering with Facebook Connectivity
Global Technology Group recognized for their excellence of HR practices and social contribution in Myanmar, encouraging people communication and people development for dynamic capability and digital HR Ecosystem YANGON, Myanmar, 14th December 2020 – Global Technology Group (GTG ), Myanmar’s flagship of innovation and creativity, and leading conglomerate business group